Filoha Estoniàna Mampitandrina Amin’ny ”Fibodoan’ny tena ihany”, Fandrisihana Fiderana Ary Ny Fihodinana Ara-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2018 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Magyar, русский, English
Filoha Estoniana Kersti Kaljulaid, nikabary tamin'ny Jona 2017. Sary avy amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Estoniàna, CC-BY.
Tao anatin'ny kabary vao haingana nataony tamin'ny fetim-pirenena, niresaka mikasika ny fiovana ara-teknolojika, ny fanatontoloana ny asa ary ny zava-doza ateraky ny fanindrahindrana ny firenena tery loatra ny filoha estoniàna, Kersti Kaljulaid. Io teboka farany io no nibahana tamin'ny fanehoankevitra iraisam-pirenena mikasika izany fanamarihany izany.
Tao anatin'ny lahateny nataony ho an'ny firenena, noho ny fankalazana ny faha-26 taona nitsingerenan'ny taona nahazoan'i Estoania ao amin'ny Firaisana Sôvietika ny fahaleovantenany, niresaka mikasika ny fifanoheran-kevitra hita eo anivon'ny soatoavim-pirenena sy ny liberalisma sosialy ny Filoha. Resaka mazava tsara sady mivantana, mifantoka amin'ny mety ahafahana miaro ny kolontsaina estoniàna nefa koa ”tsy manakana ny demokrasia”.
” Mirehareha amin'ny maha-estoniàna ahy aho ary tsy mahita ihany koa fifanoheran-kevitra amin'ny fandraisana anjara amina fiarahamonina iraisam-pirenena mifototra amin'ny soatoavina ”, hoy izy, manohy :
Ankoatr'izay , ny fahaleovantena dia midika ihany koa fahafahana tsy hiombon-kevitra. Hevitra tokana, eritreritra tokana, zo tokana : izany no ilaina hialantsika. Amin'izao fotoana izao [rehefa nahazo ny fahaleovantenany niala tamin'ny Firaisana Sovietika i Estoania], tena nekenay mazava tsara fa mitovy amin'ny fitondràna tsy refesi-mandidy ity fomba fisainana ity.
Androany, 26 taona taty aoriana, noho ny antony sasantsasany dia lasa nihevitra isika fa tsy dia ilaina loatra intsony ny hevitra samihafa. Toa mbola tsy afaka ny hahita marimaritra iraisana mari-pototra isika – ireo izay afaka manome fahafaham-po olona maro.
Namaritra ny fitondrantena tia tanindrazana ankehitriny ao Estoania izay misy koa any amin'ny toerana hafa maneran-tany i Rtoa Kaljulaid. Raha toa ka tokony nanohana ny safidy fampidirana eo anivon'ny fiarahamonina, raha ny hitany, toa ankehitriny, asiana tsindrimpeo kokoa ny amin'ny zon'ny olona tsirairay amin'ny fanaovany ny safidiny manokana..
Nanovo tao amin'ny tantaran'i Estonia sy ny ady ho an'ny fahafahan'ny firenena balta izy, mampiseho ny fomba nahaterahan'ireo Firenena demaokratika avy amin'ny ady tamin'ny fibodoana sovietika, Fanjakana demaokratika izay nandray tamin'ny fomba mora ireo governemanta ”mifanaraka amin'ny fanjakana tàn-dalàna, manaja ny fahalalahan'ny tsirairay, ny fahalalahan'ny media, ary mitazona ny fahefam-panjakana ho ao anatina rafitra azo jerena mialoha”.
Ankehitriny ny Estoniàna, hoy Rtoa Kaljulaid nampitandrina, eo ambanin'ny fandrahonan'ny ”fibodoan'ny tena ihany” izay mety hoentin'ny famerana ny fahalalahana amin'ny anaran'ny hevitra iray .
”Tsy afaka maniry ny hitondra ny fiarahamonina isika ary avy eo hanao marimaritra iraisana mikasika ny hoavy maharitr'i Estonia amin'ny anaran'ny tombontsoany ara-politika mandritra ny fotoana fohy. Ny fandresena dia arahan'ny fanefàna adidy hiantoka fa ireo resy dia tsy hahatsiaro ho natao sorona ho an'ny tombontsoan'ny hafa” hoy izy nanohy:
Matetika ny fibodoana iray dia atosiky ny fanjohiana hevitra iray, amin'ny alàlan'ny fanetsehana hanaraka fotokevitra iray tsy hihainoana ny fotokevitra na ny hevitry ny hafa. Ny vokany dia ny fahatapahan'ny feo lafika manorisorin'ireo fomba fijery manohitra, satria rehefa tsy henoina izy ireny, mivadika fotsiny ho feo tsotra ny hevitry ny hafa. Zavatra faran'izay tsotra. Ary lasa tantara fahiny sisa ny demaokrasia.
Hitantsika nitranga io fibodoan'ny tena ihany io tany amin'ireo firenena izay ninoantsika fa ireo traikefa niraisantsika sy niainantsika teo ambany toedraharaha henjana dia hanampy azy ireo hanalavitra ny fivoarana tahaka izany. Resy lahatra isika fahiny fa hoe ny demaokrasia eto amin'io firenena io, toy ny eto amintsika ihany, dia tsy hety ho ravan'ny hery avy any ivelany.
Izany no antony maha-tandindonin-doza antsika amin'ny tsy fahatafintohinantsika manoloana ny fanohanana ny fivoaran-draharaha tahaka izany raha toa ka ny tenintsika ihany no itenenan'ireo izay mandrisika azy ireny. Mandroso mafimafy kokoa noho ny fibodoan'ny avy any velany ny fibodoana ataon'ny tena ihany. Ny faneriterena ny fahalalahana, amin'ny anaran'ny hevitra iray atao ho masina, na io estonianisma madio rano fotsiny izao na ny safidy ara-tsakafo tsara indrindra, dia mety hanamarika ny fiandohana fibodoana ataon'ny tena.
Nisy akony tao anatin'ny firenena sy tany ivelany ilay kabary. Ilay estoniàna mpahay tantara, politisiana sady mpanao gazety, Toomas Alatalu, naneho hevitra hoe :
Namaritra sivana vaovao Rtoa filoha Kaljulaide – fibodoana ataon'ny tena/karakarao ny tenanareo manokana = manomboka amin'ny hevitra manokan'ny tena izany, amin'ny fanilihana ny an'ny hafa rehetra.
Tao amin'ny Twitter, noderain'ilay mpandraharaha ara-bola, politisiana ary mpilalao baskety fahiny, Mārtiņš Bondars ilay kabary:
Hafaliana lehibe tokoa ny mahita ireo mpiray vodirindrina amintsika manana filoha tahaka izany….kabary tsara be !
Ireo fampahalalambaovao rosiana kosa etsy ankilany, mifantoka amin'ny nisafidianana ilay filaza hoe “fibodoan'ny tena ihany”. Ireo masoivoho toy ny Lenta.ru dia nampifandray azy io amin'ilay hetsika mitranga amin'izao fotoana izao any amin'ireo firenena baltika mitaky fanonerana ny fahavoazana nanjo nandritra ny vanimpotoana 1940-1990, izay naha-tao anatin'ny tafiky ny firaisana sovietika azy ireo, ary ireo ezaky ny firenena baltika hampiditra ny fomba fiteny “fibodoan'ny tena ihany” ho ao anatin'ny tanisavolana ofisialin'ny eoropeàna momba ny tantaran'ny tsy refesimandidy sy ho fanomezana voninahitra ireo niharam-boina. Satria ny fanjakàna rosiana mihevitra ny tenany ho sady mpandova an'i Rosia fony fitondràn'ny Tsar, sy ny Firaisana Sovietika, dia angamba raisiny ho toy ny fanevatevàna mivantana ny lazany io
Navoitran-dRtoa Kaljulaid koa ireo fanamby mivaingana atrehan'i Estonia, toy ny teknolojia amin'izao fotoana izao sy ny ho avy, izay mitondra ho amin'ny fanatontoloana ny asa ka hanao ho rakitry ny ela ny jeografia sy ny fametrahana ny asa ho eo an-toerana ihany.
Nanomboka tamin'ny 1991 nahazoany fahaleovantena, mpikambana mavitrika ao anatin'ny fianakaviamben'ny mpanao fanatontoloana i Estonia, indrindra fa ny teknolojia niomerika. Estonia no iray manana ny tolotra aterineto haingam-pisosa indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary iray amin'ireo firenena voalohany indrindra nanambara ny fidirana amin'ny aterineto ho fototry ny olona. Lazain-dRtoa Kaljulaid mazana ny momba ny “cyberhygiène” – fahadiovan'ny habaka aterineto – sy ny fiarahamonina niomerika – mifanohitra amin'ny atao hoe teknolojia niomerika – andraisan'ny rehetra anjara.
Tamin'ny 1997 i Estonia no nanolotra ireo tolotra voalohany tao aminy momba ny fitantanana ampiasàna ny aterineto, ary nanomboka nanome ‘wifi’ maimaimpoana ho an'ny firenena kosa tamin'ny 2002. Tamin'ny 2005 ny fifidianana ampiasàna ny aterineto no nipoitra. Tamin'ny 2012, napariaka ny fotodrafitrasan'ny hosona mampiasa tara-pahazavana (Fibre Optique), ary ankehitriny 99 % amin'ny asa fitantanana no azo idirana amin'ny aterineto. I Estonia ankehitriny no voalohany an-dàlana hametraka ny antsoina hoe “data-ambassade” voalohany eo amin'izao tontolo izao, ao Luxembourg, ivontoerana iray hanangona sy hitahiry ireo angondrakitry ny firenena sy ho afaka mamerina ny firenena hiainga indray raha sanatria ka misy ny fanafihana atao amin'ny alàlan'ny aterineto.
Taorian'ny efa nahavitany nametraka ny salanisa ambony indrindra amin'ny fahaizana ny niomerika, ny fahafahana mifandray, ny sanda ambany amin'ny fampiasàna ireo tolotra amin'ny aterineto, mitodika amin'ireo fanontaniana saro-bahana kokoa i Estonia izao, fanontaniana ateraky ny fanovàna niomerika : ny resaka zo sivily, ny fahazoana antoka sy ny fiarovana ny torohay momba ny tena manokana.
Ato ho ato i Estonia dia handray an-tànana ny maha-filohan'ny Filankevitry ny Fiombonambe Eropeana azy, ary ho tetikasa ivony ny hamahana ny Fiombonambe Eoropeàna fampivoarana mitovy amin'io fiarahamonina niomerika io mitovy amin'izay misy any aminy. Lohahevitra tsy isalasalàna fa tena ilaina tokoa raha jerena amin'ny fisavàna làlana ataon'i Eoropa sy ireo ambiny manerantany ao anatin'ny toetsaina nasionalista miparitaka be manerantany.